Rehefa avy nihaona tamin’ny ankolafin-kery Malagasy eo amin’ny sehatry ny baolina kitra toy ny birao mpanatanteraky ny FMF,
Kick Boxing Hankalaza ny faha-10 taonany i Me Francis
Na dia efa nihoatra ny folo taona aza no niangalian’i Me Francis Razafimahatratra mpitantana ny klioba Eagles Kick Boxing eny Bemasoandro Itaosy dia nanapa-kevitra ny lehilahy fa hakambana ao anaty fankalazana ny faha-10 taona nanaovany an’ity taranja ity izany rehetra izany.
Champions League UEFA Ny Bayern Munich sy Barcelone no tafita farany amin’ny 1/4-dalana
Ny Fc Séville sy As Roma ary ny Bayern Munich sy Barcelone no hanampy ny Manchester City sy ny Juventus ary ny Liverpool sy ny Real
Baolina Kitra Malagasy Tonga handamina ny FIFA
Tonga eto Madagasikara nanomboka omaly 13 martsa ny solontenan’ny Federasionina Iraisam-pirenena momba ny baolina kitra na ny FIFA sy Kaonfederasiaonina Afrikanina na ny CAF.
Rugby Terres en Mêlées Ho any Andafy i MITAIZA na i Marcelia
Tamin’ny firesadresahana taminy tao amin’ny IFM na Institut Français de Madagascar Analakely ny andron’ny 8 martsa lasa teo ka nandefasana teto Antananarivo an’ilay horonantsary fanadihadiana “La jeune fille au ballon ovale” novolavolain’ny fikambanana Terres en Mêlées sy narindran’i Christophe
Jeux Coorporatif CUA 2018 Efa mihoatra ny 10 izao ireo nisoratra anarana
10 andro tsy hanombohan’ny hetsika « Jeux Coorporatif » andiany voalohany karakarain’ny CUA na kaominina Antananarivo-Renivohitra dia fantatra araka ny nambaran’ny Talen'ny kolontsaina sy ny fanatanjahatena eo anivon’ity rafitra ity, Ramihone Patrick Angelo Andriamisa,
Nanolotra amboara sy loka ho azy ireo tamin’ny alalan-dRatsimbason Andry, tale misahana ny maha olona eo anivon’ny orinasa izy ireo omaly entina hanehoana amin’ny rehetra fa manohana ny taranja ara-panatanjahantena misy eto amintsika ity orinasam-pifandraisana iray ity. Anisan’ny notolorana izany voalohany Razafinjoelina Tahiana sy Rajaonarison Baovola izay nitondra ny fiara Sabira impreza. Teo ihany koa Solofonirina Herivonjy sy Solofonirina Sandy niaraka tamin-dRanaivoson Ralambozafy sy Ralambolanja. Nambaran-dRatsimbason Andry nandritra izany fa mendrika valisoa avokoa ny ezaka atao rehetra hahafahana mampirisika hatrany ny mpandray anjara, indrindra fa ireo nahavita be tahaka azy enina mianadahy mianaka ireto. Nanambara moa ny Airtel fa vonona hatrany izy ireo ny hanohana ny hetsika tahaka izao raha anisan’ny tena nahafa-po azy ireo ny RIM tamin’ity taona 2016 ity.